Mareykanka uu safiir cusub u soo diri doona Soomaaliya | Baydhabo Online
Mareykanka uu safiir cusub u soo diri doona Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa buuxisay maranaanshihii xagga diblomaasiyadda ee Soomaaliya ay la laheyd, kadib markii Isniintii la dhaariyay safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanka uu u soo diro Soomaaliya muddo ka badan 25 sano.Danjire Stephen Schwartz, ayaa lagu dhaariyay magaalada Washington in uu noqdo safiirka Mareykanka u qaabilsanaan doona Soomaaliya kadib markii senat-ka ay meel mariyeen bishii May.
“Ma jiro qof naga mid ah oo ku kadshooma caqabadaha horyaala Soomaaliya, caqabadaha Soomaaliya ka jira ayaa waxaa kamid ah hanaanka siyaasadda dadaalada xasilinta soo kabashada dhaqaalaha iyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagaxisadachallenges,” sidaasi waxaa sheegay kaaliyaha xoghayaha arimaha dibadda Anthony Blinken, oo dhaarinta danjire Schwartz. Si kastaba, Soomaaliya ayaa sameysay horumar isla markaana madaxda Soomaaliya ayaa u arka ahmiyadda koritaanka nabadda iyo xasiloonida.
Arimaha kale muhiimka u ah Soomaaliya ayaa ah in la kordhinyo xiriirka diblomaasiyadda.
“Waa waqtigii madaxda Soomaalida ay dhisi lahaayeen ciidan qaranka oo ah mid waxtar iyo awoodba leh si meesha looga saaro kooxda Al-shabaab,” ayuu yiri Schwartz.
Magacaabista danjire Schwartz ayaa ka dambeysay markii booqaso aan horey loo shaacin uu Soomaaliya ku tagay xoghayaha arimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, taas oo aheyd booqashadii ugu horeysay oo xoghaye arimo dibadeed Mareykanka ah uu ku tago Soomaaliya.
Intii uu ku guda jirey booqashadiisa May dii la soo dhaafay, ayuu Mr. Kerry uu u muujiyay Soomaaliya in la soo celin doono xiriirkii labada dhinac ka dhaxeeyay.
Mareykanka ayaa diblomaasiyiintiisa kala baxay Soomaaliya sanadkii 1993 kolkaas oo maleeshiyaad hubeysan ay dagaal magaalada Muqdisho kula galeen ciidankii Maryeknka ee Soomaaliya joogay waxaana la soo ridey labo diyaaradood isla markaana la diley 18 kamid ah ciidanka Mareykanka.
Iyadoo wixii markaa ka dambeeyay uu dalka galay qalalaase keentay in ay abuurmaan kooxaha sida Al-shabab inkastoo sanadihii u dambeeyay laga saaray magaalooyin waa weyn ee Soomaaliya kamid ah.
Muddo sano ah Mareykanka ayaa Soomaliya ku bixinayay malaayiin dollar kuwaas oo lagula tacaalayay abaaraha, falalka burcad badeeda iyo kooxaha argagaxisada ee Al-shabab.
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u aqoonsaday dowladda Soomaaliya sanadkii 2013.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama horey ugu magacaabay Soomaaliya Katherine Simonds Dhanini in ay noqoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, hase yeeshee ayada ayaa sikeed u go’aansatay in ay xilkaas iska casisho sababo shakhsiyadeed uu u gaar ah.
Danjire Stephen Schwartz, ayaa ah sarkaal sare uu ka tirsan waaxda arimaha dibadda ee Mareykanka waxaa uu soo noqday ku xigeenkii ergada Mareykanka ee dalka Zambia, waxaana lagu bedeli doonaa James Bishop.